Soosaarka Dabka Shiinaha iyo Warshad | Jiashun
Dharka Dahaarka ee PU
Dharka Dahaarka ah ee Silikoon
Mashiinka aluminium ee aluminium
maro silig ah oo heer sare ah
marada marooga la mariyey ee loo yaqaan 'vermiculite'
Fabric Maro adag dahaarka Graphite
buste alxanka marogtada ah
maro dhalaalaya dahaarka acrylic
PTFE dahaarka Maro adag
Bacda dabka ka caaggan
Gogosha dabka aan la dhigin
Cajalad silig ah oo silig ah oo silig ah
Cajalad silikoon ah oo isku dhafan
Dhar elektaroonig ah
Dab-bakhtiiye waa nooc ka mid ah ka-hortagga dabka iyo xarumaha ka-hortagga kuleylka ee ku habboon furitaanka waaweyn ee dhismayaasha. Wax soo saarku door gaar ah ayuu ka ciyaaraa qaabeynta iyo rakibidda. Teknolojiyada, oo ay weheliso jirku, waxay la kulmi kartaa shuruudaha degenaanshaha u adkaysiga dabka iyo daacadnimada u adkeysiga dabka Dab-damiyaha waa nooc ka mid ah qalabka guuritaanka dabka dhaqaajin kara.
Dab-bakhtiiye waa nooc ka mid ah ka-hortagga dabka iyo xarumaha ka-hortagga kuleylka ee ku habboon furitaanka waaweyn ee dhismayaasha. Wax soo saarku door gaar ah ayuu ka ciyaaraa qaabeynta iyo rakibidda. Teknolojiyada, oo ay weheliso jirku, waxay la kulmi kartaa shuruudaha degenaanshaha u adkaysiga dabka iyo daacadnimada u adkeysiga dabka Dab-damiyaha waa nooc ka mid ah qalabka guuritaanka dabka dhaqaajin kara. Badanaa waa la duubaa oo la dhigaa sanduuqa birta ee albaabka iyo daaqadda dusheeda. Markuu dab kaco, waa la furayaa si looga hortago inuu dabka ka faafo albaabka iyo daaqadaha daaqadiisa. Dab-damiyaha waxaa si ballaaran looga isticmaalaa aagga kala-goynta dabka ee dhismayaasha warshadaha iyo kuwa bulshada. Waxay si wax ku ool ah uga hortagi kartaa faafidda dabka waxayna xaqiijin kartaa badbaadada nolosha iyo hantida. Waa xarun looga hortago dabka dhismayaasha casriga ah.
Runtii mid walboo ka mid ah walxahaasi waa mid adiga xiiso kuu leh, fadlan nala soo socodsii. Waan ku farxi doonaa inaan ku siinno xigasho markii la helo mid ka mid ah faahfaahinta faahfaahsan. Waxaan leenahay khabiirkeena gaarka ah ee R&D si aan ula kulanno mid ka mid ah requriements, Waxaan rajeyneynaa inaan si dhakhso leh u helno weydiimahaaga waxaan rajeyneynaa inaan fursad u helno inaan kula shaqeyno mustaqbalka. Ku soo dhowow inaad eegto ururkeenna.
Markii ay soo saartay, iyada oo adeegsanaysa habka ugu weyn adduunka ee hawlgal lagu kalsoonaan karo, qiimo jaban oo hooseeya, waxay ku habboon tahay xulashada dadka wax iibsanaya ee Jeddah. Shirkadeena. oo ku dhex yaal magaalooyinka ilbaxnimada qaran, taraafikada degelku waa mid aan dhib badan lahayn, duruufo juqraafi iyo maaliyadeed oo gaar ah. Waxaan ku daba joognaa "dadka u janjeedha, wax soo saar taxaddar leh, maskax dhis, samee falsafad" shirkadeed. Maareyn tayo wanaagsan oo adag, adeeg fantastik ah, qiimo jaban oo Jeddah ah ayaa ah mowqifka aan ka taaganahay ujeedada tartamayaasha. Haddii loo baahdo, ku soo dhowow inaad nala soo xiriirto annaga oo ah boggayaga internetka ama la-tashiga taleefanka, waxaan ku farxi doonnaa inaan kuu adeegno.
Hore: Cajalad silig ah oo silig ah oo silig ah
SOO DHAWAYN IN AAD LA TASHATO
Xagee lagu isticmaali karaa maro silica oo sareeya
Maxay tahay in fiiro gaar ah loo yeesho habka loo adeegsanayo dharka aluminium ee aluminiumka gudaha insula-da dibadda
Fudu Jiangnan Park Cusub ee Warshadaha Dhaqaalaha, Degmada Zhonglou, Magaalada Changzhou, Gobolka Jiangsu.